Xukuumadda Soomaaliya oo soo dhoweysey baaritaankii musuq maasuq ee Soma Oil. – Radio Daljir
Diseembar 19, 2016 2:18 b 0
Muqdisho, 19 December, 2016. Wasaaradda Batroolka & Macdanta waxay soo dhaweynaysaa go’aankii Xafiiska Musuq Maasuqa Daran ee Boqortooyada Ingiriiska uu ku soo afjaray baaristii Soma Oil & Gas Exploration Limited (SOMA).
Soma ayaa lagu eedeeyay in lacag laaluush siisay masuuliyiin Soomaaliyeed oo ka tirsan Wasaaradda Batroolka & Macdanta. Eedaynta Soma ayaa noqotay mid dad badan soo jiidata dareenkooda. Nasiib wanaag baaristii waxay ku soo gaba gaboobday inayan jirin wax cadeyn ah oo sheegaya in laaluush la kala qaatay.
Go’aankaan ayaa la mid ah go’aankii ay soo saareen sanadkii hore (2015) guddi madaxa banaan ee u magacaabay Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya. Guddigaan madaxa banaan ayaan wax cadeyn ah u helin waqtigaas in heshiiska tayaynta shaqalaha ee u dhexeeyay Wasaaradda Batroolka iyo shirkadda Soma Oil uu ahaa mid wax kala bedelasho ah ama laaluush lagu kala qaatay.
Soomaaliya hadda ayay bilaabaysaa horumarinta ka faa’idaysiga shidaalka. Dawladda Soomaaliyeed waxaa ka go’an inay sameyso siyaasad cad, hay’ado karti leh iyo kaabayaal sahli kara ka faa’idaysiga kheyraadka dabiiciga. Waxaan ognahay inaan la horumarin karin arimaha shidaalka haddii aanay jirin siyaasad iyo qorshooyin cad oo wax looga qabanaya musuq maasuqa.
Baaritaanada noocan ah wuxuu nagu caawinayaa inaan si hufan u shaqeyno. Waxaan sii hagaajinaynaa qaab shaqeedkeena si aan qayb kaga noqono horumarinta dhaqaalaha dalka. Waan soo dhaweynaynaa go’aankan.